Saturday February 01, 2020 - 16:39:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Haddaba dhibta waddanka maxaa keenay?. Yaase ka mas'uul ah? ma rabo in aan adeegsado hal aayad oo quraanka sharafta badan ee rabbigeen ah mana rabo in aan soo qaato hal xadiis oo ah kuwa saxiixa ah. Macnahaygu ma ahan in aan ka hor jeedo axaadiista rasuulka iyo kitaabka rabbigeen, xaashaa!, balse waxa aad ogaataa in maalintii nebi muxamed CSW lagu yidhi tolkaa u dig wixii u horreeyay ee uu u sheegay wacdi ma ahayn aayad ma ahayn wanaag kale ma ahayn. Kolkii uu u dhawaaqay kadib waxa uu ku bilaabay haddii aan idin yidhaahdo buurtan gadaasheeda col baa ku sugan ma iga rumeysanaysaan, waa kuwii ku yidhi haa, sababtoo ah been waligayo kaaga maannaan baran.
Adduunka markii la taagay ee bina aadam la abuuray hawlna waa lala abuuray, bina aadam la aragyaaba dhib la arag. Markasta oo bina aadam yimaado kibir waa jirayaa haddii aan la helin sharci xakameeya, dadku waa laba nooc qaar askarta ka baqda iyo kuwo ilaahay ka cabsada. Kuwii alle ka baqanayay xuduudkooda waa ay garanayaan oo ma soo dhaafaan balse kuwa askarta ka baqdaa waa weji ka cabsade kuwaas baana sida dhabta ah loo sameeyay jeelasha si ay u joojiyaan xadgudubka iyo dulmiga.Akhristoow dulmiga iyo eexda qaraabo-kiilka ku dhisani waa tiir kamida dhibka soomaaliya. Qabyaaladda oo aynu dhibkeeda naqaano waxa ka faa’iideystay cadawgii soomaalida ee soo jireenka ahaa ee itoobiya. Itoobiya waa "church state” waa dawlad kiristaan ah, base-keeda dhabta ahina waa kiniisada kolkaa innaguna halkii aynu ka noqon lahayn Mosque State ama ummad masaajid, waa aynu ka tagney oo waxa aynu nidhi diinta masaajidka halooga soo tago taasoo noqotey caqabad iyo iilasho weyn. Labadaa sababood ee isa saaran shabaabku uma sabab aha oo markii aynu democracy-ga qabiilka ku dhisan qaadannay ma ay jooginba, eexna iyo qaraabo kiilna kuma dhaqmaan oo nidaamkooda cidkastaa waa iska dhex arki kartaa.
Faylasoof reer baakistaan ahaa ayaa odhan jirey "waxbarashadu waa aysiidh kolkaa qofka adigaa qaabeysan kara” islamarkaana aqoon yahan hindiyaan ahina waxa uu lahaa weedh odhanaysa "Fircoonkii reer masar ee ilaahnimada sheegtay doqon buu ahaa, intii uu carruurta reer banu israaiil laynayay muu dugsiyo aqooneed u furo kolkaa waxa u soo bixi lahaa jiilka uu rabo”.
Haddaba tahriibku waa waxa dhammeeyay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed islamarkaana waddanka wax uun u qaban kari lahaa. Maahmaah soomaaliyeed baa tiraahda "Rag waxtar yari mooyaane waxmatare maleh” boqolaalka soomaaliyeed ee dhintay, kuwa lacago badan laga qaaday ee badbaaday iyo kuwa haddaba yurub daroogada ku bartey saameyn wayn bay ku leeyihiin dhibta waddanka ka jirta. Maxaa keenay haddaba tahriibta?. Dhowr sababood baa keenay oo ay ugu weyn yihiin Amni xumo iyo Shaqo la’aan.
Haddaba labadaas yaa ka masuul ah. Waagii waddanku lixda bilood nabadda ahaa ee wadaaduhu ka talinayeen kolkii lagu soo duuley ee la baaba’shay waatii laysugu tagay Asmara Caasimadda ereteriya Markaas baa nimanka loogu yeedho beesha caalamku ay yidhaahdeen "Itoobiya iyo adeegahooda cabdullaahi yuusufba waanu saareyna balse waxa aanu keenaynaa ciidamo kale oo Afrikaan ah.
Sheekh Xasan Daahir baa weydiiyay sowta hadda dalka iyo intey wadaaduhu ka talinayaan nabad tahay. Kolkaasaa loogu jawaabay idinkaan waddanka idinka ilaalinaynaa. Bal markaas akhristoow isweydii amni xumada yaa ka wada waddanka? Haddii nabad la rabo maxaa xilligii muqdisho ay nabadda ahayd waddanka loogu soo duulay. Gaal baa laga sheegay xilligaas "muqdisho waa nabad laakiin nabaddii aan rabnay ma aha!”.
Waatii aynu hore usoo sheegnay haddii la rabo in ummad la darso waa in sheeko xariirooyinkooda la yaqaannaa. Sababtoo ah sheeko xariiradu waxay ay ka turjumaysaa hab fikirka ummaddaas. Haddaba sheeko xariir soomaaliyeed tan ugu caansan ama kamid ah kuwa ugu caansan baa waxay leedahay: Beri baa waxa jiri jirey diin iyo dacawo, maalin maalmaha kamid ah ayaa ay beratameen kolkaas ayaa dawacadii qodaxi mudday. Dawacadii baa u qayshatay diinkii oo tiri "waar diinoow qodaxda iga goo” diinkii baa ka gooyay, haddana dawacadii bay qodaxi mudday, markaas bay markale u qayshatey diinkii "waar diinoow iga goo” isna waa uu ka gooyay laakiin ugu dambaystii diinkii bay qodaxi mudday dawacadii buu u yeedhay "naa dacawooy iga goo” way diiday oo way ka carartey. Diinkii baa qodaxdii iska jarey. Kadib sidii loo ordayay baa la helay laba guri. Diinka gurigiisii waxa uu ahaa mid si fiican u agaasiman oo heersare ah balse dacawadu guri daldaloola waa roobku kasoo gudbayo ayay heshay. Dabadeeto diinkii ayay dab u doonatey, diinkii inta uu illaabey wixii hore ayuu dabkii siiyay.
Intii ay magaalada sii dhex ordayeen ayaa dadkii magaaladu weydiiyeen xagga ay ku ordayaan, markasta oo la weydiiyo waxa ay yidhaahdaan maanta suldaankii baa casuumad samaynaya oo aanu ka gaadheynaa. Muddo yar kadib waxa dhacdey in magaaladii oo dhami is hor tubaan gurigii suldaanka, suldaankii waa uu naxay waxa aanu bilaabay in uu ilaaladiisii heegan geliyo si ay u ilaaliyaan. Ugu dambayn dadkii waxa uu weydiiyey waxa ay rabaan, waxa ay u sheegeen in casuumad suldaanku samaynayo kadibna ay sidaa guriga ku yimaadeen. Odayga suldaanka magaalada ahaa oo faraxsan dhanka kalena dhidid wayni ka yimid ayaa yidhi "yaa warkan idiin soo sheegay?” sidii qoloba qolo kale farta ugu fiiqeysay baa la soo gaadhey carruurtii. Cabbaar markii la eeg eegay hareeraha ciyaalkii waxa ay arkeen ninkii beenta u soo sheegay, ninkii beenta sheegay isaga laftarkiisii baa rumeystey beentii oo yimid gurigii suldaanka si uu casuumadda qayb uga helo. Kolkaa beenaalihii ayaa la qabtey oo la xidhay. Umadda soomaaliyeed waa ummad hadal oowaxa ay u nugul yihiin in ay beenta si fudud u rumeystaan.
Kacaankii Wadaadada W/Q Wadaadyare